October 24, 2009 at 6:13 pm4comments	မရွှေမိရဲ့ အကျင့်တစ်ခုက တော့ ညအိပ်ခါနီးမှာ စာအုပ်တအုပ်အုပ်ကို ဖတ်လိုက်ရမှအိပ်ပျော်တဲ့အကျင့်ပါ။ စာအုပ်မဖတ်ပဲ အိပ်လိုက်ရရင် တော်တော်နဲ့အိပ်မပျော်ပြန်ဘူး။ ဒီတော့ အိပ်ယာဘေးမှာ စာအုပ်တွေပုံထားပီး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဖီလင်လာနေတဲ့စာအုပ် တအုပ်အုပ်ဖတ်လိုက်ရမှ စိတ်ကျေနပ်သွားပီး အိပ်ပျော်သွားတယ်။
Entry filed under: ဖတ်ဖြစ်တဲ့စာအုပ်တွေအကြောင်း. Tags: .	ရှုမ၀မဂ္ဂဇင်း ၁၉၅၃	ဘိလပ်ပြန်သန်း ရဲ့  ခင့်စိတ်ကူး	4 Comments Add your own
K | April 17, 2010 at 11:14 pm
mashwemi | April 18, 2010 at 10:37 pm
မကေကိုတော့ သိနေတာကြာပေါ့🙂 မိုးကုတ်အကြောင်းရေးထားတာအရမ်းဖတ်လို့ ကောင်းလို့ အဲဒါဖတ်ပီးတည်းက မမ ဘလော့ကို အမြဲ လာလာဖတ်တယ်။ နောက်ပီး မင်းသားလေးရေးထားတုန်းကလည်း ကွန်မန့် တွေတောင် ချန်ခဲ့သေးတယ်။ ဘလော့ရေးလောက်တဲ့ထိ စာရေးမကောင်းသေးပါဘူး အမ ရေ။ ဂျာနယ်ကျော်မမလေးအကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားသူတွေနဲ့ မျှဝေချင်တာနဲ့ ရိုက်တင်ပေးနေတာပါ🙂
MrDBA | October 24, 2009 at 10:30 pm
SDL | October 24, 2009 at 8:26 pm